भीष्म ढुंगाना , ३१ बैशाख २०७७, बुधबार, ०४:४६ pm
लकडाउनका बीच दैनिक २ घण्टाका लागि सेयर कारोबार खुला गरिएको छ । हामीले दुई दिनको कारोबारलाई हेर्यौं । दुबै दिन नेप्सेमा नेगेटिभ सर्किट ब्रेक लागेको छ । बजार खोलेर किन घटाएको भन्ने आवाज पनि सुन्न थालेको छु । केहि समय अघिसम्म बजार किन बन्द गरेको भन्ने अनि अहिले फेरी किन खोलेको भन्ने ? यस्तो तर्क नआउनुपर्ने हो ।
बजार अलिअलि बढ्ने, घट्ने, तलमाथी भैरहन्छ ।
हामीले तीन दिन कारोबार गरेपछि बजार सञ्चालनको मोडालिटीबारे पुनर्विचार गर्ने भनेका छौं । सर्किट ब्रेकमा २ प्रतिशतको क्याप नलगाएको भए त सात प्रतिशतले नै घटाउने रहेछन् भन्ने पनि देखियो । मंगलबारको भन्दा बुधबारको कारोबारको ट्रेण्ड अलिकति फरक आएको छ । मंगलबार १०, २०, ५० कित्ता मात्रै सेयर किनबेच गर्नेहरु देखिएका थिए । तर बुधबार तीन चार सय कित्ता सेयर खरिद बिक्रि गर्ने लगानीकर्ताहरु पनि देखिएका छन् । कारोबार रकम थोरै भए पनि एउटै लगानीकर्ताले धेरै कित्ता सेयर किनबेच गरिरहेकाले बजार खोल्नुको औचित्य पुष्ठि हुन्छ ।
फेरी बजार एक दुई दिन घट्यो भनेर आत्तिनु पनि पर्दैन् । हामी भने बिहिबारको बजार हेरेपछि के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौं । सरकारले सबै बजार बन्द गर्ने, आवत जावत बन्द गर्ने निर्णय गर्यो भने हामी पनि बजार बन्द गर्नेबारे सोचौँला । अहिलेकै अवस्था रह्यो भने बजारको क्रमलाई मात्रै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
बजारमा अनावश्यक घट बढ हुन सक्छ भनेर नैं सर्किट ब्रेकमा २ प्रतिशतको क्याप लगाएका थियौं । दुई दिनको कारोबारमा बजार यसरी घट्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । यसरी लगातार घटिरहन्छ भन्ने लागेकै थिएन् । मंगलबार र बुधबार दुबै दिन कारोबार भएका सबै कम्पनीको सेयर ओरालो नै लागेको छ ।
मंगलबार असाध्यै सानो सानो कारोबार भएको थियो । बुधबार अलि ठूला कारोबार भएका छन् । बिहिबारको कारोबारको अवस्था अझै राम्रो बन्यो भने एक खाले मोडल बनाउँछौं । अहिलेकै क्रम जारी रह्यो भने अलि फरक ढंगले अघि बढ्ने सोँच बनाउँछौं ।
अहिले १०/१० कित्ता सेयर किनबेच गरेर बजार घटाउने नियत राखेका हुन कि भनेर अनुसन्धान गर्न लगाएका छौं । बजार घटाउने नियतले १०/१० कित्ता सेयर किनबेच गराएका हुन् भने कारवाही गर्छाै । नेप्सेलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिईसकेका छौं ।
लगानीकर्ताहरुका लागि यो सेयर किन्ने बेला हो । हिजो अस्ति १६०० मा बजार हुँदा किन्नेहरुले आज १२०० मा हुँदा किन नकिन्ने ? लगानीकर्ताहरुलाई बजारमा प्रवेश गर्ने र सेयर किन्ने समय हो भन्न चाहान्छु । विचार गरेर, सावधानीपूर्वक बजारमा प्रवेश गर्दा हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले सोच विचार गरेर राम्रा सेयर उठाउने बेला हो । –नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
‘केहि घण्टाका लागि सेयर बजार खोल्न सकिन्न, अब चाँडै पूर्ण स्वचालित बनाउँछौं’
एक हप्ताका लागि फेरी बन्द भयो सेयर बजार, अब २०७७ बैशाख ४ गते मात्रै